Ny valizy ambanin'ny tanker dia antsoina koa hoe valves pneumatika, valves subsea pneumatic, valves vonjy maika, ary valves tampoka vonjy maika. Koa satria nisy lozam-pifamoivoizana haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha any Shina tamin'ny taona 2014, nanamafy ny fanaraha-maso ny sampan-draharaham-panjakana mifandraika ...
avy amin'ny admin tamin'ny 20-06-02
1. Alohan'ny asan'ny etona dia mila esorina ilay famotopotorana manohitra ny fiakaran'ny rano. Aorian'ny nahavitan'ny sambo sy ny fampangatsiahana ny tanky dia haverina amin'ny laoniny avy amin'ny fivoriambe vaovao. 2. Alohan'ny asan'ny etona dia mila esorina ilay plug azo zahana eo ambanin'ny valizy ambanin'ny tany. Taorian ...
avy amin'ny admin tamin'ny 20-05-02
Inona ny vy vy? Raha ny fahalalan'ny olona maro, ny "vy tsy misy fangarony" dia vy tsy ho harafesina, fa mpanjifa maro kosa no mamokatra teboka harafesina rehefa misy teboka harafesina (teboka) manjelanjelatra eo ambonin'ny valves vy tsy misy fangarony. Inona no antony? Ny valves vy tsy misy fangarony dia manana ...
avy amin'ny admin tamin'ny 19-09-25
Na ny basy solika ao anaty kamion-tsolika dia afaka manisy tombo-kase tena miankina amin'ny hoe ny efitrano fandraisam-pefy afaka mamorona hantsana ampy. Noho izany, rehefa tsy azo fehezina samirery ny basy refueling dia tokony hovahana arak'ireto hevitra manaraka ireto: 1. Hamarino raha ny tombo-kase eo anelanelan'ny ba ...